Hello - Waxaanu ku sameynay Spain
Ku soo dhawoow Waxaan ku jirnaa Magazine Spain, goobta aad ka heli doonto dhammaan macluumaadka ku saabsan waxyaabaha ugu wanaagsan Gourmet ee Spain sida dahabka, lafaha, Iberian, saliid saytuun, iwm. Meelo aan caan aheyn oo ay soo booqdaan, milkiilayaashooda, kor u qaadista ugu fiican, waxay ku ciyaaraan Gran Vía iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxaan ka sameysaneynaa Spain waa adduunka dhaqanka, dhadhanka, khamriga, muusikada ... Sida caadiga ah Isbaanishka nolosha iyo hagaha dhammaan dadka doonaya inay galaan Spain cajiibka ah, ama dalxiis ahaan ama muwaadin dalkan weyn.
Bilowga waxaan kugula talineynaa inaad soo gashid dukaanka online-ka ee heer sare ah ee alaabta Spanishka ah: www.made-in-spain.com
post Next: Bodegas Navarro López
Mid ka mid ah fikirka "Hello"
10.0.0.1 isagu wuxuu leeyahay:
31 Diseembar, 2018 at 8: 20 pm
Ku qanacsanaanta joogtada ah ee aad gelisay blogga iyo macluumaadka faahfaahsan ee aad soo bandhigto.
Waa arrin aad u wanaagsan in la helo barta blogka mar kasta oo aan aheyn mid aan isku mid ahayn taariikhda dib loo habeeyay.
Akhri cajiib! Waxaan ku badbaadiyey boggaaga oo waxaan ku jiraa akhbaarahaaga RSS-ka ee kumbuyuutarkayga.